Kupfuura maBlockers: Maitiro Ekuita Kuti Ads Ako Aone, Akadzvanya On, uye Kuitwa Pamusoro | Martech Zone
Muvhuro, March 19, 2018 Jeff Kupietzky
Munzvimbo dzanhasi dzekutengesa, kune akawanda midhiya chiteshi kupfuura nakare kose. Padivi rakanaka, zvinoreva mikana yakawanda yekubuditsa meseji yako. Kune rakadzika, kune makwikwi akawanda kupfuura nakare kose kutora vateereri kutarisisa.
Kuwanda kwemidhiya kunoreva zvimwe kushambadza, uye izvo kushambadza zvinonyanya kukanganisa. Haisi yekungodhindisa kushambadzira, yeTV kana redhiyo kushambadzira. Yakazara-peji online pop-up kushambadza izvo zvinoita kuti iwe uwane zvisingawanzo "X" kuti uzvibvise, otomatiki-kutamba mavhidhiyo kuti utsungirire usati waona chaunoda zvemukati, mabhana emashambadziro anoratidza kumusoro kwese, uye shambadziro dzinototeedzera iwe kuburikidza nekudzokororazve, kubva pakombuta kuenda kune mbozhanhare uye kudzoka zvakare.
Vanhu vakaneta nechero ipi neipi kushambadzira. Sekureva kwechidzidzo cheHubSpot, vanhu vazhinji vanoona akawanda ma ads anosemesa kana asinganzwisisike, asina basa, kana kutuka. Izvo zvinowedzera kuburitsa pachena kune vanoshambadzira ndezvekuti aya marudzi eshambadziro anopa vanoona maonero akashata kwete kwete chete mawebhusaiti avanotungamira asiwo mhando dzavanomiririra. Saka kushambadzira kwako kwekudyara kunogona kuve nemhedzisiro kune vanhu kupfuura zvawanga uchida; zvinogona kuumba kusanzwisisika kwechiratidzo chako pane vanhu, panzvimbo pechakanaka.
Mamwe Ads, Kuwedzera Kuvhiringidzika: Pinda Ad Blockers
Hazvishamisi kuti vanhu vawana nzira yekutenderedza kushushikana kwemazuva ano ekushambadza bombardment: kushambadzira-kuvharidzira kuwedzerwa. Zvinoenderana neshumo rapfuura rePageFair & Adobe, Vane 198 mamirioni vashandisi veInternet vanoshingairira kushandisa ad blockers kudzivirira inouya yekushambadzira yedhijitari mota senge mabhena, pop-ups uye mu-mutsetse kushambadza kubva kuoneka pane avo avanofarira mawebhusaiti uye vezvenhau, uye kushandiswa kwevanoshambadzira blockers kwakura ne vanopfuura makumi matatu muzana pagore rapfuura. Kuvharidzira kushambadza kunowanzo bata chero kupi kubva pa15% - 50% yemotokari yemuparidzi webhusaiti, uye inonyanya kuitika pamasaiti ekutamba, uko vateereri vari tech-savvy uye vachikwanisa kushandisa tekinoroji yekudzivirira.
Saka mushambadzi anofanira kuitei?
Vashambadziri vari kutsvaga "kudarika avo vanovharira" vanogona kushamisika kuziva kuti pane svikiro rinogona kuvabatsira kudzora kushambadzira, uye haisi nhepfenyuro yemagariro-e-iyo-iyo nguva. Iri email. Funga izvi: maapps anonyanya kushandiswa paInternet nhasi haasi Facebook kana Twitter. Ivo, kutaura zvazviri, Apple Mail uye Gmail.
Email ndiko kune eyeballs, uye haisi kuenda, sekufunga kwevamwe. Muchokwadi, email ine simba kupfuura nakare kose; mazhinji mabrand anoronga kutumira mamwe email gore rino uye kuenderera iko kuwedzera. Email kushambadzira inozvirumbidza iyo ROI ye3800% uye inotyaira dzimwe shanduko kupfuura chero imwe chiteshi. Kushambadzira mameseji ane kashanu mukana wekuonekwa muemail pane zvaari paFacebook, uye email ine makumi mana nguva inoshanda kuti uwane vatengi vatsva kupfuura Facebook kana Twitter. Zvese mune zvese, izvo zvine simba rine simba.
Nei chiyero chakakwira chekudzoka kubva kuemail? Zviri nyore, inzvimbo imwechete mabhendi ane yakasimba, kubatana kwakabatana neyekupedzisira-mushandisi - chinongedzo chinogara uye hachitsamire pane browser, chishandiso kana yekutsvaga injini. Vanhu vanowanzo chengeta yavo email kero kwenguva refu; vanowanzo shanduka kero yavo yekumeso ivo vozoshandura yavo email kero.
Nehurombo, kune ese mabhenefiti anounzwa neemail, kudzivisa kushambadza kwekushambadzira nekutumira chete maemail hakunyatso kucheka; zvakaoma kwazvo kushambadza uchishandisa mapuratifomu senge Apple tsamba kana Gmail zvakananga. Saka ungagone sei kutora iko kusimba kweemail uye zvese izvo zvingangove zvazvinopa?
Tora maKo eziso Akarurama muemail Tsamba
Imwe nzira ndeyekuisa kushambadza mumaemail matsamba anotumirwa nevaparidzi vari kutovatumira kunopinda, vateereri vakasarudzika. Vaparidzi vemaemail matsamba vari kutsvaga nzira dzekuita mari mota dzavo dziripo, kuwedzera goho ravo, uye, kazhinji, vanogashira kuiswa kwezishambadziro senzira yekuita izvozvo.
Kune vashambadziri, izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuisa yakanangwa yakanangwa, zvine simba kuendesa kushambadzira kune aripo mutengi uye anotarisira eemail mishandirapamwe, kutenderera kushambadzira blockers kusvika kune vakatapwa vateereri. Kupfuura zvese, vateereri ava vakasvinudzwa zvakanyanya kuti vaone zvimwe zvemukati zvakatoratidzwa kuva zvinonakidza kwavari. Vanyoreri vetsamba vakasarudza kugamuchira mameseji ekutengesa kubva kuvatsikisi; vanovimba uye vanokoshesa zvirimo zvemuparidzi. Kuisa kushambadza kwako mune ino mamiriro kunobatsira iwe kupfeka pane iko kuvimba uye kutarisisa. Iwe unongofanirwa kuita kuti kushambadzira kwako kuve kwakakodzera, kunodzidzisa, uye kugona kubata mukati mezvido zvemuverengi kuburikidza nehukama.
Kugadzira kushambadza kwako kuri nyore sezvo iwe uchitoziva zvese nezve muverengi kuburikidza nenongedzo yetsamba. Matisa zvako zvemukati zveshambadziro nezvakada munhu uyu, zvaasingade, hunhu nezvido zvake, uye uchavaka kuvimba nekuvimbika, uye kuwedzera matepisi-kuburikidza nemitero.
Iva Kumanikidza Zvakaringana nezveKudzvanya-Kupfuura Kuti Uite.
Chikamu chakakosha chemunhu chinosanganisira kutaura nyaya. Usangoshambadzira chigadzirwa chemumba chitsva - goverana nemuverengi nzira shanu dzinozoita kuti hupenyu hwavo huve nyore. Usangoshambadzira sevhisi nyowani inozovachengetera nguva nekushushikana - taura nzira dzavanoshandisa nguva yavo nyowani yekuita chimwe chinhu chavanoda.
Aya marudzi enhau akasarudzika anozotungamira vaverengi kune rako rekumhara peji, kwaunogona kuburitsa mhinduro yedambudziko ravo: chako chigadzirwa. Panguva iyoyo, mushandisi ari kubatikana uye anofarira, uye anogona kutenga chigadzirwa chako kana sevhisi.
Chikamu chakanakisa - zviri nyore.
Kune mhinduro dziripo nhasi dzino shandura iyi yese ine simba email kushambadzira maitiro. Mhinduro idzi dzinogona kukudyidzana neyako netiweki yevapepeti venhau vane vateereri chaivo, uye nekukubatsira iwe kuvandudza zvakanangwa, zvinoenderana zvemukati zvine chokwadi chekuita kuti vateereri vataurirane zvakanaka nechako chigadzirwa.
Nemaonero matsva paemail, nzira yekushambadzira chaiyo, uye anokwanisa, ane simba email naye kupfuura ma blocker - uye tora mukana wesimba rechokwadi iro rekushambadzira reemail rinofanira kupa.